डक्टर्स आर्टिकल | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "डक्टर्स आर्टिकल" बढ्दैछ मिर्गौला एट्याक सामान्य लापरवाहीले मिर्गौला रोगको खतरा – डा. अनिल बराल, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल / हरेक बर्ष मार्च महिनाको दोश्रो बिहीबार अर्थात् मार्च १४ मा विश्व मिर्गौला दिवस मनाइन्छ । यो आठौं विश्व मिर्गाैला दिवस हो । यो दिवस अन्तर्राष्ट्रिय मिर्गौला समाज र मिर्गाैलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले शुरु गरेको हो [...]
क्यान्सरबाट बाँच्ने आधार, समयमै उपचार - डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल, बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ / क्यान्सरका एक सय भन्दा बढी प्रकार हुन्छन् ।् जसले शरीरको जुनसुकै भागमा पनि असर गर्न सक्छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २००८ मा ७६ लाख मानिसको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो । यो विश्वभरमा हुने समग्र मृत्युको १३ प्रतिशत हो । क्यान्सरका कारण हुने [...]
बढ्दै छ स्ट्रोकको जोखिम डा.वसन्त पन्त, बरिष्ठ न्यूरो सर्जन, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल / स्ट्रोक (बे्रन एट्याक) मष्तिस्कमा रक्त प्रवाहमा अवरोध भएपछि उत्पन्न हुने समस्या हो । मष्तिस्कका कोसिकाहरूले पु¥याउने अक्सिजनका माध्यमले नै मष्तिस्कले काम गर्छ । रक्त प्रवाहमा अवरोध हुँदा त्यो प्रक्रिया पनि रोकिन्छ, दिमागका कोसिकाहरू मर्छन् र स्ट्रोक हुन्छ । स्ट्रोक हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको [...]
मधुमेहबाट दीर्घकालीन रोगको खतरा डा. अंशुमाली जोशी, मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ, अल्का अस्पताल बिहान खाली पेटमा रगत जाँच्दा रगतमा चिनीको मात्रा १२६ मिलिग्रामभन्दा बढी देखियो भने ब्लड सुगर बढेको मानिन्छ । यदि १०० देखि १२६ मिलिग्रामको बीचमा देखियो भने मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना बढेकोे मानिन्छ । त्यस्तै खाना खाएपछि सुगर दुई सय भन्दा बढी देखिएमा [...]
के आँखा पनि अल्छी हुनसक्छ ? डा. आनन्द शर्मा, आँखा रोग बिशेषज्ञ/ नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ । हालैका केही वर्षहरुमा स्वास्थ्य प्रदायक संस्था तथा मेडिकल कलेजको संख्यात्मक वृद्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधामा दक्ष जनशक्तिको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि उत्साहजनक अवस्थामा छ । तर पनि नेपाली समाजमा व्याप्त गरीबी, अशिक्षा तथा अन्धविश्वासले [...]
फोक्सोका कारणले हुने मुटु रोग डा. दीर्घसिंह बम, बरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ / मानिसलाई फोक्सोसम्बन्धी लाग्ने धेरै रोगमध्ये नेपालमा फोक्सोको क्षयरोग सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यसबाहेक बच्चादेखि बृद्धसम्म हुने फोक्सोका रोगमा निमोनिया, ब्रोङकाइटिस, ब्रोङकोएक्टासिस र फोक्सोका क्यान्सर हुन् । फोक्सोमा अन्य रोग लाग्दैमा सबैमा क्षयरोग भएको हो कि भन्ने डर देखिन्छ । केही मानिसलाई फोक्सोको रोगका कारण [...]
खतरनाक हुन्छ ड्रग्सको लत डा. कपिलदेव उपाध्याय गायक सुगम पोखरेल लागूपदार्थ सेवनको आरोपमा पक्राउ परेको खबर सुनेपछि यसबारे केही लेख्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो । यो घटनाको लगत्तै पूर्वयुवराज पारस शाह विरामी परेको खबर आयो । उनका बारेमा पनि लागूऔषध सेवन गरेका समाचार समयसमयमा प्रकाशमा आएका छन् । बास्तवमा लागूऔषध के हो र यसले सेवनाकर्तामा कस्तो प्रभाव पार्छ [...]
अनौठो रोग थाइराइड डा. दिना श्रेष्ठ, इन्डोक्राइनोलोजिष्ट, नर्भिक अस्पताल / थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण (मेटाबोलिजम) गर्ने हो । त्यसैले यसलाई शरीरको एक्सिलेटर पनि भन्ने गरिन्छ । [...]
Older posts Recent Posts	स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे, महासचिवमा मुडभरी